Ny fiverenana JESOA KRISTY HO AN’NY SEPTAMBRA OR Oktobra 2016 | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Talohan’ny niresaka ny momba ny fiverenan’i Jesosy Kristy, dia mendrika ny mitadidy ny sasany fototra ny Fivavahana Kristianina, ary indrindra fa ny hiaina ny finoana ny fotoana farany.
Ho Kristianina HATRAMIN’NY FARANY TIMES
Voalohany ho Kristianina dia ny mahatakatra fa Andriamanitra no Mpamorona ny zava-drehetra ka noho izany izahay koa dia famoronana ‘Andriamanitra.
Izany ihany koa fantany fa Andriamanitra no namorona antsika maimaim-poana sy omena malalaka mba hanapa-kevitra ny tenantsika ny fomba ampiasantsika io fanomezana faran’izay tsara fa Andriamanitra dia nanome antsika « Fiainana ».
Hahatakatra bebe kokoa an’Andriamanitra sy ny zavaboary ny olona, ​​manasa anareo aho mba hamaky ny boky « Ny Mpitoriteny Mpanjakan’ny Miverina ny Haizina tonga fahazavana » mahita ny lahatsoratra momba ny boky: The Book – Ny Mpitoriteny Fiverenan’i ny Mpanjaka
Andriamanitra ao amin’ny famindram-po tsy manam-petra no nanome antsika sarobidy izany rehetra izany « fiainana » Indrisy fa nankasitraka kely amin’ny tena zava-dehibe ny. Fiainana nomena antsika avy amin’Andriamanitra tsy mitaky na inona na inona avy amintsika ho setrin’izany. Izany fanomezana. Fa indray andro fa ny fiainana tsy maintsy mifarana.
Ho an’ny sasany, indrisy, izany dia avy ny tanora ny fiainana taona izay mijanona, ho an’ny hafa izy ireo tonga menatra akory zato taona na mihoatra.
Ary avy eo, fotsiny araka ny fotoana ny fahafatesan ‘ny vatana, ny fanahy miseho eo anatrehan’Andriamanitra ny mpamorona.
Tsy maintsy mahatakatra fa ny fotoana dia zavatra noharin’Andriamanitra izao ka noho izany amin’ny fotoana ny fahafatesana ny fanahy tonga tamin’ny fotoana mivantana ny fitsarana farany.
Nandritra izany fitsarana safidy telo ireo dia natao ho an’ny fanahy.
Ny sasany izay nanana zavatra fady ny fiainana dia ho voaozona ny mandany mandrakizay any amin’ny helo.
Ny ankamaroan’ny efa nanana fiainana tsy madio na efa nivadika « mafana » koa anefa mandeha any amin’ny helo mandrakizay mandany.
Ireo mitarika ny fiainany ara-pahasalamana amin’ny fanajana sy ny fahamarinana ihany koa ny handeha na dia teo aza ny fakan-tahaka fiainany mandany mandrakizay any amin’ny helo.
Maha-Kristiana dia ny mahatakatra fa ny fanahy rehetra voaheloka vao teraka mba mandany mandrakizay any amin’ny helo. Izy io dia azo antoka!
Ary na inona na inona dia mamela ahy hilaza hoe helo raha tsy ho mafy ho an’ny sasany noho ny an’ny hafa Miorina amin’ny Asan’ny Apostoly natao nandritra ny fiainany.
Tsy misy zavatra tsy madio afaka miditra ny fanjakan ‘ny lanitra sy ho tahaka isika rehetra mitondra ny fahotana tany am-boalohany amin’ny fiafaran’ny fiainantsika eto an-tany ny eto An-tany, ka voaheloka isika rehetra mba handany ny fiainana mandrakizay any amin’ny helo.
Inona no helo tsy misy mahalala indrindra, na izany aza, ao amin’ny Bokin’i Enoka isika ankapobe, nanamarika fa misy toerana any an-danitra, na dia voahidy ho mandrakizay zavatra noforoniny rehetra rehefa tsy nankatò an’Andriamanitra. I Jesoa Kristy Niresaka momba ny helo evokes Gehena (fa na inona na inona milaza ao amin’ny Baiboly, inona marina Gehena) hypothesized koa aho mba ho ny helo amin’ny lahatsoratra: Fahatakarana hahatakatra AN’ANDRIAMANITRA HELL ,
Izany dia mahatahotra fa ny helo dia toerana iray izay misy ivelan’ny fiainana mandrakizay ny fitiavan’Andriamanitra. Fa mbola eo ambany fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso ny ny anjeliny. (Jereo ny Bokin’i Enoka) https://victorpicarra.wordpress.com/le-livre-dhenoc/
Maha-Kristiana dia ny mahatakatra fa ny fitiavana ihany ‘i Jesoa Kristy dia afaka manampy antsika mba manantena ny ho afa-mandositra izany hellish anjara mandrakizay nikasa’ Andriamanitra ho an’ny olombelona satria ny tsy fankatoavan’i Adama sy Eva.
Ny hoe ny Kristianina dia ho mpanota mahafantatra sy manaiky ny ho voavonjy noho ny fitiavan ‘i Jesoa Kristy, izany hellish anjara.
Maha-Kristiana dia ny manaiky sy miaina araka ny fampianaran’i Jesosy Kristy amin’ny fitiavana, ny fiadanana, ny fitiavana, fangoraham-po sy fanetren-tena.
Maha-Kristianina dia atao batisa amin’ny rano, ny Fanahy sy ateraka indray.
Amin’ny alalan’ny batisa anaty rano isika, mibebaka amin’ny fahotantsika ary tonga i Jesoa Kristy mba ho voavonjy amin’ny alalan’ny fanekena ny fitiavany sy ny ra nalatsaka ho antsika teo amin’ny hazo fijaliana.
Tamin’ny alalan’ny batisa ny fanahy isika, mangataka amin’Andriamanitra mba hitari-dalana ny fiainantsika. Rehefa avy nandray batisa ny Kristianina dia tsy maintsy manao ny fomba manokana amin’ny vavaka mba hangataka an’Andriamanitra mba hitarika sy hitantana ny ainy.
Koa mandeha eo amin’ny fiainana intsony ny fanirian’ny ny tena, nefa ny an’ny Fanahy. Izany no ny batisan ‘ny Fanahy.
Dia toy izany no nateraka indray isika eo amin’ny fiainana eto an-tany nanenjika ny fiainantsika amin’ny fitiavana, ny fiadanana, ny fitiavana, fangoraham-po sy fanetren-tena. Fa amin’ny hafanam-po mba hanaraka ny fampianaran’i Jesosy Kristy, manompo an’Andriamanitra rehefa manaraka ny didiny sy ny fanampiana ireo izay mitady ny fanampiantsika. Mitandrina hanampy anao tsy tokony hitarika mitondra izay mandray azy io mba mikiry ny fahotany sy ny ratsy ataony. Tsy hitarika anao ho mandà ny fampianaran’i Jesoa Kristy.
Rehefa manao ny hanampy anao ho lasa tompon’andraikitra amin’ny fampiasana ity fanampiana.
Noho izany ny zava-misy ny manome vola ho iray mpidoroka zava-mahadomelina na mamo tsy aoka ny hevitrao ianao famerenana ny asa tsara. Raha manontany anareo hanome azy hanina vola. Ary koa ny zava-misy ny manome vola ho an’ireo izay mampiasa ny ankizy mba miangavy tsy tokony hitarika anao hino fa ianao famerenana ny asa tsara. Ianao no lasa tompon’andraikitra tafahoatra izany ny ankizy.
Rehefa avy ny fiainantsika eto an-tany, ny Kristianina miseho eo anatrehan’Andriamanitra ho amin’ny fitsarana. Sy ny fitiavana an’i Jesosy Kristy, dia tsy nandeha mahitsy ho any amin’ny helo.
Ny Kristianina dia tsaraina, raha ny asan’ny tsara ny fiainany, dia ho any amin’ny fanjakan’ny lanitra. Raha ny asa ny ny fiainany dia tsy mendrika, dia handeha hamaky afofandiovana alohan’ny hiditra ny fanjakan’ny lanitra. Fa raha ny asa ny ny fiainany dia ratsy dia any amin’ny helo na dia lasa Kristianina.
Nandritra ny roa arivo taona izany no izy.
Fa isika amin’ny faran’ny fotoana sy ny zavatra miova kely.
Inona no fiovana dia hoe amin’ny andro farany i Jesoa Kristy dia tsy maintsy hiverina any an-tany mba hanjaka any noho ny arivo taona izay no hampisaraka ny maha-olombelona ny fitsarana farany.
Ary tsara ny Kristianina eo am-piandrasana ny fiverenan’i Jesoa Kristy eo amin’ny fanantenana fa tsy ho ela dia ho.
Ny fanjakan’i Kristy eto an-tany dia ho santatry ny mandrakizay isika, dia ho velona intsony, nefa dia mbola handalo fahafatesana alohan’ny manana ny fiainana mandrakizay.
Ny ratsy fanahy dia ho roahina avy eto an-tany mandritra ny Arivotaona.Isika hiaina eo ambany ny fitondran ‘Andriamanitra amim-pitiavana sy fiadanana.
Saingy, satria misy ny fa, ka izany no manan-danja. Izany ve ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy dia tsy maintsy ho toy ny fanaintainam-piterahana.
Koa noho ny fiverenan’i Jesoa Kristy dia akaiky sy ny fiainana intsony Sarotra ho an’ny olombelona.
Afaka rehetra mahita fa rehefa mandeha ny fotoana, indrindra fa nanomboka tamin’ny 29 Septambra 2008, ary fotoan-tsarotra indrindra amin’ny ambaratonga rehetra. Jereo ny lahatsoratra: ny telo famantarana ny fiverenana JESOA KRISTY eto an-tany!
Eto an-tany : ny horohoron-tany, fipoahan’ny volkano, tafio-drivotra, oram orana, rivo-doza, ny afo, ny fiovaovan’ny toetr’andro, ny fihotsahan’ny tany, tsy fantatra feo nankarenin-tsofina, sy ny tany Mirodana famoronana tsefatsefaky goavana.
An-danitra: tainkintana lavo, masoandro volkano, dia manambara ny fiverenan’ny Nibiru, fiakaran’ny maripanan’ny ny rafi-masoandro planeta, OVNI.
Wildlife : Maty tsy voazava amin’ny olona an-tapitrisany isan-taona avy amin’ny biby fiompy, bibidia sy ny vorona sy ny trondro.
Olombelona : faharavana, areti-mifindra, fahaverezan’ny soatoavina, Eksodosy, ny herisetra, ady sy filazana ady.
Ny Fiangonana : Apôstazia dia hita amin’ny mpitondra ambony. Ny Papa no nialany ny fampianaran’i Jesosy Kristy amin’ny alalan’ny fahafantarana ny fivavahana rehetra toy ny lalana ho amin’Andriamanitra.Izao no manadino ny tena tenin’i Jesosy Kristy, « Izaho no lalana ny fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny ahy! «
Ireo tenin’i Jesosy Kristy dia matanjaka sy tsy hampisambotra ny tenany ho adihevitra.
Unknown feo nankarenin-tsofina, dia azo adika ho toy ny Apokalypsy trompetra. Https://youtu.be/mTOQvDzihTU
Ireo rehetra ireo fisehoan-javatra mitranga toy izany outsized ka dia naminany ao amin’ny Baiboly, mba hanambara ny fotoana farany sy ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy.
Ny zava-drehetra atao avy amin’Andriamanitra mba hamoha ny olombelona, ​​fa tena vitsy indrisy toa mahatsapa ny manokana fotoana iainantsika.
Men mieritreritra bebe kokoa mikasika ny zavatra ho hatao manaraka faran’ny herinandro na ny fomba no hanirina ny faran’ny volana, fa tsy mivavaka amin’Andriamanitra noho ny famonjena ny fanahiny, na dia eo anivon’ny Kristianina.
Kanefa ny olana rehetra sy ny loza amin’ny alalan’ny olombelona, ​​izay mbola hiharatsy kokoa ary na mandra-ny Tompo Jesoa Kristy.
Terrible miandry anay alohan’ny fotoana ny fiverenan’ny ny Mpanjakan’ny Mpanjaka i Jesoa Kristy.
Fantatsika ny inference fa fotoana farany talohan’ny fiverenany no ho mafy indrindra.
Mihoatra noho ny hatramin’izay, dia tsy maintsy mivavaka sy mivavaka hatrany hatrany isan’andro.
Tokony hisaotra an’Andriamanitra isika isaky ny fanampiana sy mivavaka amin’Andriamanitra mba hitari-dalana sy hiaro antsika amin’ny fotoana rehetra ny fiainantsika isika, indrindra amin’izao fotoan-tsarotra sy Tranga.
Maha-Kristiana dia ny mahatakatra fa ny fitiavan ‘i Jesoa Kristy no tanana nanolotra’ Andriamanitra mba hamonjy antsika amin’ny helo.
Ankoatra ny famonjena ny fanahintsika amin’ny helo noho ny fitiavany koa i Jesosy Kristy, dia hamonjy ny maro amintsika, dieny tsy mbola ara-batana hiverina an-tany.
Ireo izay ho voavonjy ary mamorona ny Fiangonan ‘i Jesoa Kristy, dia ho voaova ho any an-vetivety ho tsapanao fa tena ny fahazavana. Izy ireo dia hesorina any an-danitra ka miditra mivantana avy teto an-tany ny fiainana ho amin’ny fiainana mandrakizay tsy misy fahafatesana.
Ireo izay maty sy izay efa nalaina an-keriny, raha mbola velona izy. Dia hitsangana amin’ny maty ao amin’ny vatana ny fahazavana sy ho nesorina ihany koa any an-danitra amin’ireo izay no namonjena amin’ny velona.
Miara-dia hanatrika ny fampakaram-badin’ny Zanak’ondry no ho fanekena mandrakizay izay hahatonga an’i Jesoa Kristy sy ny fiangonana niforona.
Raha Andriamanitra no miezaka mba hamoha antsika amin’ny fomba rehetra dia ny maro an’isa azo hovonjena sy izay mety ho tafiditra ao anatin’ny Fiangonan ‘i Jesoa Kristy izay ho esorina.
I Jesosy Kristy sy Andriamanitra tia ny olona!
Fa ny lehilahy izay maniry ny mandany fiainana mandrakizay?
Aza mieritreritra indray mipi-maso fa ny fotoana farany dia misy dikany, ny porofo maro, ny farandro dia tena mihazakazaka ary tsy hisy intsony izany.
I Jesoa Kristy no eo am-baravarana, ary izany no fotoana ho an’ny fanantenana ny ho voavonjy, ny mibebaka amin’ny fahotantsika, ny misdeeds, ny fahadisoantsika, ny fahadisoana sy ny fisainan-dratsy.
NANDROSO NY ASA signe ny fiverenana JESOA KRISTY
Rehefa heverina ny fivoarana ny famantarana tena isika ao amin’ny farany mihinjitra eo anoloan’ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy.
Nohazavaiko tamin’ny lahatsoratra ny telo famantarana ny fiverenana JESOA KRISTY eto an-tany! Nisy telo famantarako izao eo amin’ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy.
01) Ny fampisehoana ny Anti-Kristy
02) Ny fahatelo fanorenana indray ny tempoly tao Jerosalema
03) Ny ady eran-tany ho nanaiky Jesosy Kristy teo an-miverina
Fa ny famantarana voalohany « anti-Kristy » dia tsy maintsy mahatakatra fa misy ambaratonga maro.
Voalohany ao anatin’ny fiangonana, ny antikristy dia niforona ny mpanjaka rehetra nifandimby hatramin’ny Latran papa fifanarahana.
Ny farany papa « François » personalizes antikristy izany fa eo ambany ny endrika ‘ny Zanakondry dia ny amboadia izay mitondra ny Kristianina izay manaraka ny mahitsy any amin’ny helo. Jereo ny lahatsoratra: Ny fanambarana ofisialy ny amin’ny maty ny fiangonana katolika
Araka ny faminanian’i Malakia ny papa, Papa François no farany papa. Na iza na iza no atao hoe amin’ny faminaniana « i Petera ny Romanina », izay nitondra ny fiangonana nandritra ny fahoriana talohan’ny nandravana an’i Roma sy ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy.
Ny fandravana an’i Roma dia tsy voatery midika ny fandringanana ny tanànan’i Roma tamin’ny horohoron-tany lehibe iray, fa ny firodanan’ny Eoropa Tahaka ny ranom-Roma « ny fahavalo mpanjakan’ny Toko XII ao amin’ny Apokalypsy boky. » ka noho izany ny Antikristy rafitra.
Fantatsika avy ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy sy ny mpaminany Daniela, ny fahoriana lehibe farany 42 volana.
Koa araka ny Papa François dia voafidy ho Martsa 13, 2013 tokony angamba hahita ny fiverenan’i Kristy ho any an-tany tamin’ny Septambra na Oktobra 2016, angamba nandritra ny andro firavoravoana amin’ny trompetra.
Jereo ny lahatsoratra: NY FARAN’NY HERINANDRO FARANY NY DANIELA END FARAN’NY 2015 OR 2016
Ny anti-Kristy ihany koa ny endriky ny demonia Andriamanitra telo izay iray ny roa biby sy ny mpaminany sandoka izay tanjona dia ny hanenjika ny Kristianina sy hitari-dalana azy mivantana ao amin’ny lalan’ny helo.
Isika, dia azontsika tsotra fotsiny fa vao haingana dia ny biby Papa voafaritra ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy Chapter 17.
By amin’ny sasany mahita Papa François mpaminany sandoka. Manokana Mino aho fa ny Papa François dia iray amin’ireo roa biby any an-dranomasina, ny bibi-dia ho ny teo aloha Papa Benedict XVI fa maro taloha Papa dia mbola velona. Ary ny amin’ny mpaminany sandoka fantatro ny iray ihany, izay mpanara-dia manenjika ny Kristianina.
Izany dia Ilay atao hoe « Mohammed » , izay maty tamin’ny 632 na niteraka ny fivavahan-diso izay manompo islamista sy ny jihadists.
Io fanorenana indray dia tena fanirian’ny vahoaka ny Jiosy, fa Andriamanitra dia tsy hamela ny fanorenana indray ny tempoly akaiky ny trano fivavahana « al-Aqsa » ny fivavahan-diso ny mpaminany sandoka.
Ny tempoly vaovao no ho ny tempoly ‘i Jesoa Kristy no hidina avy any an-danitra « i Jerosalema any an-danitra »
Izany no hany sady farany mihinjitra eo anoloan’ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy.
Dia mazava fa ady ity no nanomboka hatramin’ny 2012. Hitantsika ny maridrefy ity ady izay efa fanatontoloana sy ny tombony eo amin’ny fitondrana sy mitsambikina mihoatra isan’andro.
Io ady dia kosa dia nandeha mba hisambotra an’i Jesosy Kristy amin’ny fiverenany.
Izahay tamin’ny Febroary ary inona no nanambara tao amin’ny haino aman-jery lavitra manome toky. Torkia sy Arabia Saodita te-handeha hiady Syria. Ny Rosiana sy Iran manohitra ary mampanantena ny fiverenana amin’ny vatam-paty vaovao ireo belligerents raha tonga any Syria.
Shina noho ny fitondran-tena ny ady manohitra ny Etazonia sy ny mpiara-dia aminy any Afrika sy Syria any an-tsaha amin’ny ara-toekarena. Fa ny miaramila an-tsehatra any Atsinanana kery, dia resaka fotsiny ny fotoana amin’ny paikady miaramila. Mazava ho azy fa ny Sinoa dia hirotsaka an-tsehatra ho fanohanana ny tafika Rosiana.
Izany dia tao amin’ny tani-hay any Megido amin’ny Isiraely fa i Jesoa Kristy araka ny Baiboly dia tsy maintsy hampitsahatra ady izany .
Ary rehefa tondraka ny ady amin’izao fotoana izao ny Syria sy Israely ho nanafika. Ary hisy hisy fiantsoana sy ny ranomaso, fa dia ho diso aoriana loatra ny hanatona an’i Jesosy Kristy sy ho voavonjy. Satria izany no ho vokatry ny farany izay fotoana ho tanteraka amin’ny fiverenan’i Jesoa Kristy.
Ary azo atao fa ny any amin’ny fanadihadiana ny famantarana ireo, fa ny volana Septambra na Oktobra, 2016.
Taona 2016 ity, dia efa fantatrao fa ho ratsy noho 2015. Fa raha Kristy no tsy mivoaka eo amin’ity taona ity 2016, tokony hanantena zava-doza.Izay ny fikororosin’ny toe-karena, fa koa ny loza lehibe habe.
Tsy hamerina ny tenako aho ampy, Tsy izaho no mpaminany , ary Izaho efa namitaka imbetsaka mikendry fotoana fohy ho amin’ny fiverenan’i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny maharatsy ny mifampiresaka tsy diso aho ny momba ny aggravation ny famantarana isan-taona .
Rehefa be dia be aho diso momba ny fanambaràna ny fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy, tiako mba ho tsara kokoa ary ianao mariho, fa i Jesoa Kristy dia ho avy toy ny mpangalatra, ka noho izany dia tsy misy mahalala hoe rahoviana marina no ho ny fiverenany.
Ary koa ny eo am-piandrasana ny fiverenany aho amin’ity taona ity ny volana Septambra na Oktobra araka ny fandalinana ny famantarana, fa tsy maintsy milaza fa i Jesoa Kristy dia afaka handroso ary haka ny fiangonana amin’ny fotoana rehetra talohan’ny fiverenany.
Tokony koa milaza fa mety ho fiverenana io tatỳ aoriana, ary hirotsaka an-tsehatra ao amin’ny taona 2017 na 2018 for, izay misy ihany koa ny famantarana fa Izaho no hanazava rehefa tonga ny fotoana.
Ka ho azo antoka, mivavaka ary manantena ny akaiky fiverenan’i ‘i Jesoa Kristy, satria ny haingana dia hiverina sy fanaintainana tsy ho mamirapiratra ho an’ny olombelona.
Tamin’ity taona ity tamin’ny 2016 na dia sarotra ho an’ny olombelona mba ho ho antsika Kristianina ny herintaona ny fanantenana, ny fibebahana sy ny vavaka fa i Jesoa Kristy mihazona antsika voasoratra anarana ao amin’ny bokin’ny fiainana mandrakizay.
Mibebaha ary maro tonga Kristy, raha tsy te-handany mandrakizay any amin’ny helo.
Tamin’ny fotoana nanoratana ity tsirairay Mbola ho voavonjy.Nomen’Andriamanitra safidy malalaka anareo sy izao no fotoana maka ny lalana marina.
Avia an’i Jesosy Kristy amin’ny alalan’ny batisa anaty rano nangataka ny mpisorona, ny pasitera na ny Kristianina, ary avy eo indray, ary indray mivavaka mba hahazoana ny fiarovana ny Fanahy Masina avy amin’Andriamanitra mba hanampy anao, miaro anao sy hitarika ny dingana ao amin’ny aizim-ny amin’ny fotoana farany ny haizina.
Ny fitiavana, ny fiadanana sy ny fifaliana ao am-pon’ny sy ny tokantrano ao amin’ny mialoha ny amin’ny fanesorana ny Fiangonana ho an’ny sasany, ary ny fiverenana teo an-tendrombohitra Oliva tao Jerosalema ny Tompontsika sy Jesosy Kristy Mpanjaka, izay zanakalahy tokan’ny Andriamanitra noho ny fitondran ‘Mpanjakan’ny Mpanjaka amin’ny tany mandritra ny arivo taona Olona ny Fara Andro manasaraka ny maha-olombelona.
Manasa anareo aho mba hamaky ny lahatsoratra:
RAHA MORA Jesosy Kristy ho avy, NY FIANGONANA hanjavona Tsy ampy taranaka!
FARAN’NY HERINANDRO FARANY NY DANIELA END FARAN’NY 2015 OR 2016
Ny fotoana dia ny Vavaka Manasa anareo aho mba hivavaka;
VAVAKA ny Ray sy ny Arahaba ry Maria